Izincwadi zamaJalimane zamaNazi
I-Germany Germany yama-Nazi - u-Adolf Hitler
I-Germany Germany yama-Nazi - ukubusa kokuqala kwamaNazi
I-Nazi Germany isiphambano - impilo nomsebenzi
I-Nazi Germany isisekelo - imvelaphi yamaNazi
IJalimane lamaNazi liziqophile - izinqubomgomo zobuhlanga
IJalimane lamaNazi liwela umgwaqo - indlela eya empini
IJalimane lamaNazi liyisiphikiso - iRepublic yaseWeimar
Imibhalo yaseJalimane yamaNazi
Imibuzo yaseJalimane yamaNazi
Imibuzo yememori yaseJalimane yamaNazi - izibalo ezilwa namaNazi
Imibuzo yememori yaseNazi Germany - imicimbi 1918-23
Imibuzo yememori yaseNazi Germany - imicimbi 1924-32
Imibuzo yememori yaseNazi Germany - imicimbi 1933-39
Imibuzo yememori yaseNazi Germany - amaqembu
Imibuzo yememori yaseJalimane yamaNazi - imibono
Imibuzo yememori yaseJalimane yamaNazi - abaholi
Imibuzo yememori yaseNazi yaseGerman - imigomo nemiqondo (I)
Imibuzo yememori yaseNazi yaseGerman - imigomo nemiqondo (II)
Imibuzo ememori yaseNazi yaseJalimane
Imibuzo yamaJalimane amaNazi - izinqubomgomo zezomnotho
Imibuzo yamaJalimane amaNazi - uHitler
Imibuzo yamaJalimane amaNazi - impilo nomsebenzi
Imibuzo yamaJalimane amaNazi - izinqubomgomo zobuhlanga
Imibuzo yamaJalimane amaNazi - izwe lamaNazi
Imibuzo yamaNazi Germany - i-NSDAP
Imibuzo yamaJalimane amaNazi - indlela eya empini
Imibuzo yamaJalimane amaNazi - IRiphabhulikhi yaseWeimar
Izwekazi leNazi Germany
Izihloko zaseJalimane zamaNazi
Nazi Germany ubani
Igama lamaNazi laseGerman lamaNazi - imiqondo
Igama lamaJalimane lamaNazi - abantu
Igama lamaJalimane lamaNazi Germany - izindawo
AmaNazi Germany amagama
Indaba ye IJalimane yamaNazi ihehe futhi yamangaza izigidi zabantu. Kwaqala ngokwehluleka kweRiphabhulikhi yeWeimar futhi kwagcina ngosizi lweMpi Yezwe II nokuQothulwa Kwesizwe. Phakathi, ubuNazi buthinte izigidi zabantu futhi bashintsha inkambo yomlando wanamuhla.
AmaNazi bebeyiqembu labashokobezi bezwe ababumba iqembu labo lezepolitiki e1919. Kuholwa ngu Adolf Hitler, owayeyinkampani yezamabhizinisi eyake yasebenza eMpini Yezwe I, iqembu lamaNazi lahlala lilincane futhi lingafaneleki kuma-1920 amaningi.
Ukuqala kwe Ukucindezeleka Okukhulu futhi nomphumela odabukisayo eJalimane wabona uHitler namaNazi bethola ukwesekwa okwengeziwe. AmaNazi azethula njengenketho entsha nenye ehlukile yabantu baseJalimane abafisayo. Kwakukuncane okuncane ngoHitler namaNazi. Iningi lokuqashelwa kwabo - amandla ombuso, ukubusa okugunyaziwe, ubuzwe obunamdlandla, ubuzwe bukaDarwinism, ubumsulwa bohlanga, ukubuthwa kwezempi kanye nokunqoba - bekungenxa imibono yesikhathi esedlule, hhayi eyizayo.
Ngo-1930, amaNazi ayephenduke iqembu elikhulu kumaJalimane Reichstag (iphalamende). Lokhu kusekelwa kufake isandla ku ukuqokwa kuka-Adolf Hitler njengo-chancellor ngoJanuwari 1933.
UHitler nabalandeli bakhe babephethe iminyaka eyishumi nambili kepha umthelela wabo eJalimane wawumkhulu. Kungakapheli iminyaka embalwa, amaNazi ayibulale intando yeningi futhi udale umbuso wobumbano lweqembu elilodwa.
Impilo yezigidi zamaJalimane zashintshwa, ezinye zaba ngcono, eziningi zaba zimbi. Abesifazane bayalwa babuyela ezindlini futhi bangabandakanywa kwezepolitiki nasemsebenzini. Izingane babengafundile ngemibono namagugu amaNazi. Izikole nezindawo zokusebenzela zaguqulwa ukuze kufezekiswe izinhloso zamaNazi. Amaqembu abuthakathaka noma aphazamisayo izinhlanga noma izinhlanga - kusuka AmaJuda kuya ogula ngengqondo - abakhishwe ngaphandle noma baqedwe.
AmaNazi futhi adelela umhlaba ukuvuselela impi engapheli eyayingenise iJalimane kwiMpi Yezwe I emashumini amabili eminyaka ngaphambili. Ekugcineni, kuma-1930s asephelile, uHitler waqala ukukhulisa insimu yaseJalimane, inqubomgomo eyadala impi ebulala kakhulu emlandweni wesintu.
Iwebhusayithi ye-Alpha History yeNazi yaseJalimane ingumthombo obanzi wekhwalithi yezincwadi yokutadisha ukukhuphuka kwamaNazi neJalimane phakathi kwe1933 ne1939. Inamakhulu emithombo ehlukene eyinhloko neyesibili, kufaka phakathi imininingwane izihloko ezifingqiwe futhi amadokhumenti. Iwebhusayithi yethu futhi iqukethe izinto ezibhekisela kuzo ezifana izikhathi, glossaries, 'ubani ubani' nemininingwane ku- umlando. Abafundi bangaphinde bahlole ulwazi lwabo futhi bakhumbule ngohlu lwezinto ezenziwa online, kufaka phakathi kwakha, emaphazili futhi ukubekwa kwamagama. Imithombo eyisisekelo eceleni, konke okuqukethwe Kumlando we-Alfa kubhalwe ngothisha abaqeqeshiwe nabanolwazi, ababhali nezazi-mlando.
Quizzes ukukhetha okuningi